Forum serasera malagasy Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna fahatelo - Dinika forum.serasera.org
Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna fahatelo
Fitohizan'ny hafatra : Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna fahatelo
Nehemiah - 24/07/2013 08:49
Lasa somary hafahafa ny dôgman'ny evôlisionan'ny dinôzôra sy ny vorona. Tsy misy intsony ny tetiarana (arbre généalogique) ankehitriny, fa ny cladistique no ampiasaina.
Ny tetika mahazatran'ny olona dia mampiasa ny toetra misongadin'ny karazan-javamananaina mba hanasokajiana azy ireo, ny phénétique indray dia mifototra @ fitovizany ankapobeny, fa ny cladistique kosa dia mifototra @ fitovizany notsoahina.
Toy izao ny pôzin'ny cladogramme 1 :
Hitantsika eto fa efa tsy misy intsony izany hoe "i anona niteraka an'i anona", miala tsiny ho an'ny lalaon-teny. Izao indray dia misy von-tady maromaro mifandray ny tetiarana. Ny von-tady 1 dia mizara 2 mankany ambony, ny 1 dia mankany @ von-tady manaraka, ny 1 mankany @ karazan-javaboary mbola misy ankehitriny na efa lany taminga. @'izay afaka miara-miaina ny "raibe" sy ny "zafy", ary lazaina fa manana razana iombonana izy ireo, fa tsy ny "raibe" no niteraka ny "zafy". Ilay razana iombonana aloha dia tsy mbola hitan'ny maso mihitsy, fa von-tady mitondra ny anaran'ny fianakavian-javaboary misy azy no misolo azy .
Raha tsorina izany dia milaza ny cladistique fa rehefa manana ny zafy isika dia tsy mila mitady ny raibe intsony.
Jereo anie ireto fiarakodia tsara be ireto :
Lamborghini Countach, novokarin'ilay orinasa manamboatra fiarakodia italiana manomboka t@ 1974.
Lamborghini Murcielago, nivoaka t@ 2002
Mitovitovy be ihany ny endriny. Inona no mahatonga an'izay ? Ny fananan'izy ireo mpamorona iombonana sa ny fananan'izy ireo razana iombonana ? Raha ny lôjikan'ny cladistique sy ny fiheverana evôlisionista hafa aloha dia ny faha2 no valiny e :p.
Jereo akaikikaiky ilay cladogramme etsy ambony. Misy fanontaniana vitsivitsy mipetraka rehefa zohina ity cladogramme ity :
- nahoana no tsy mba ny dinôzôra manana andilam-borona no niteraka ny vorona fa ireo manana andilan'androngo ?
- @ fomba ahoana no nipoiran'ny volomborona, izay taova tsy mba tsotra, @ alalan'ny sampona kisendrasendra ?
- Ahoana no ahafahan-dreo mitompo teny fantatra ny fisian'ireny dinôzôra mahay misidina izay nanadino ny fahaizany misidina hitantsika @ faramparan'ny cladogramme ?
- Raha misy baraingo @ voalohan'ny cladogramme dia midika fa tsy fantatra mazava hoe iza no karazan-javaboary niteraka ny dinôzôra. Raha izay fotsiny dia efa baraingo dia nahoana no tokony inoana ny sisan'izay ?
Asakasakareo aloha fa ny valiko manokana dia izao : angano angano, arira arira :p
Taona vitsivitsy lasa izay, nisy fampirantiana mitondra ny lohateny hoe "Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight" tany @ Royal Ontario Museum. Nasiana sary vongana Deinonychus (hoho goaibe) araky ny fiheveran'ny manam-pahaizana azy taloha ilay izy :
Nisy soratra teo ambany hoe :
Namboarina tanelanelan'ny 1986 sy 1989 miaraka @ hoditra misy kira ireto sary vongana ireto, avy @ dian'ny hoditra fôsilina dinôzôra hafa. T@ Deinonychus nosoritsoritana t@ 1969, noheverina ho dinôzôra mitovitovy @ vorona ary mety ho razan'ny vorona izy. Ankehitriny dia fantatra fa nanana razana mahay misidina - droméosaures mahay misidina - i Deinonychus, ka karazana vorona tsy mahay misidina izy fa tsy dinôzôra. Raha mba taorian'ny nahitàna fôsilina droméosaures tany Sinina no nahitàna ny Deinonychus dia tsy mba nieritreritra azy ho manana kira ny manam-pahaizana fa nieritreritra azy avy hatrany ho vorona tsy mahay misidina.
Mampino ihany ve izao ?...
Dia izao indray hono no Deinonychus tena izy :
Dia hanaovany inona re ireto volomborona be dia be ireto ? Tsy afaka misidina akory izy, tsy afaka misambotra ny hazany akory izy, hitabataba eran'ny ala fotsiny, tsy misy ilàny azy afa-tsy ny mikopaka @ fomba marevaka fotsiny angamba . Moa tsy ho rehatan'ny fantina natoraly izao biby izao ?
Tsy aleo lavitra ihany ilay teo aloha ?
Nehemiah - 24/07/2013 08:50
Miharena - 24/07/2013 21:10
Mety ho marina ilay fanamarihana raha toa ka foromporonina ny taova isanisany mba hoenti-maneho ny fivoaran'ny biby isankarazany fa ny tsy azo lavina fa misy dia ny fitambaran-tsela maro manome ny organisma isanisany izay samihafa firindra no manome ny fahasamihafana. Ary azo ampifandraisina izany fahasamihafana izany eo amin'ny fanakilasiana ka misy ny iray fianakaviana ary misy ny karazana manana rafitra mihoatra kokoa noho ny namany hahafahana mijery fa mety nivoatra avy amin'ny teo aloha no nahazoana azy manana rafitra mivoatra kokoa. Izay no atao hoe fivoarana na evolisionisma.
Nehemiah - 25/07/2013 08:45
@ fomba ahoana ?
@ fomba ahoana no nitrangan'izao ?
Miharena fa ny tsy azo lavina fa misy dia ny fitambaran-tsela maro manome ny organisma isanisany izay samihafa firindra no manome ny fahasamihafana. Ary azo ampifandraisina izany fahasamihafana izany eo amin'ny fanakilasiana ka misy ny iray fianakaviana ary misy ny karazana manana rafitra mihoatra kokoa noho ny namany hahafahana mijery fa mety nivoatra avy amin'ny teo aloha no nahazoana azy manana rafitra mivoatra kokoa. Izay no atao hoe fivoarana na evolisionisma.
Izay anie no tiako aseho @ ohatry ny Lamborghini : tsy hoe mitovy firafitra ny zavaboary 2 dia automatique manana razana iombonany nivoarany izy ireo, fa mety izy ireo manana Mpamorona iombonana koa no mahatonga an'izay.
Efa noresahako aminao ny olana @ lafiny ara-pototarazo mifanohitra @ 'fivoarana tsikelikely' (transition) takian'ny fotopisainan'i Darwin, ka tsy iverenako.
Ity 1 ity koa dia tena mifandray @ lohahevitra, ary efa somary noresahako aty izay, fa raha marina ny fotopisainan'i Darwin dia tokony hita taratra @ fitambaran'ny fôsily ambany tany izany fizotra tsikelikely, ka tokony be dia be ny fôsily "transitionnels", izany hoe tokony ahitàna fôsily be dia be izay sady trondro no amphibiens raha ny trondro no nivoaran'ny amphibiens, na fôsily be dia be izay sady dinôzôra no vorona raha ny dinôzôra no nivoaran'ny vorona, sns, kanefa tsy mba izay no zavatra hita, fa ny dinôzôra dia dinôzôra 100 % (cf. ny filazako momba ny Eoraptor etsy ambony), ny vorona dia vorona 100 %, sns.
Nilaza i Darwin t@ "The Origin of Species" fa izay ihany no objection tena manohitra ny teôriany, fa angamba mbola tsy tanteraka ny fitambaran'ny fôsily fantatra t@'izany fa ho hita miandalana foana ny fôsily mifindra karazana, kanefa moa tsy mba izay no mitranga ankehitriny.
N.B. : efa voaporofo ankehitriny fa vorona ranoray nipetraka t@ hazo ny Archéoptéryx, fa tsy dinôzôra zary vorona
Na dia ny fizotra antitranterin'ny mpandala evôlisiona, izany hoe ny sampona sy ny fantina natoraly, dia manana olana goavana, averiko eto ny zavatra efa nolazaiko tetsy momba an'izay :
Raha ireny resaka lolo mivadika ho mainty rehefa lasa mainty ny hazo bouleau nohon'ny sarbô @ rivotra dia lolo miteraka lolo ihany io. Niova tampoka ny tontolo niainany dia mba sendra nisy sampona nahatonga ny lolo sasany ho mainty, ka ireny no nandrombona satria lasa izy ireo indray no tsy hitan'ny vorona mihaza azy ireo.
Fa ny sampona dia fahasimbàna @ antontan-kevitra ao anatin'ny fototarazo (gènes), tahaky ny DVD mikiky. Raha kikisanao kely isan'andro ny DVD-n'i Malok'Ila 21 dia tsy mba hivoaka avy ao ny tohi3n'ny "Seigneur des Anneaux", fa ho simba tanteraka tsy hay vakiana intsony ... Lazain'ny néo-darwinisme fa afaka manova ny mikrôba ho olombelona izay, fa tsy marina izay.
Ary ny fantina natoraly moa dia mazava loatra fa izay eo ihany no azony fantenana fa tsy afaka mamorona antontan-kevitra ara-pototarazo vaovao ilay izy.
Izay no zava-misy, kanefa afenin-dreo @ sarambabembahoaka izay olana izay satria tsy mahavaha azy
Miharena - 25/07/2013 09:19
Mety tsy azonao angamba hoe matoa misy ireo fandalinana ny fifandrohizan-tarazo eo amin'ny zavamananaina rehetra dia noho ny fandroson'ny fahalalàna fa ny ADN no rafitra mandrindra ka misy ireo karazana taova izay mbola hita ankehitriny eo amin'ny biby izay mitovy firafitra na koa misy tetezana hiampitany amin'ny rafitra manaraka. Miteny sahona sy trondro ihany moa ianao, fantatra fa ny firafitry ny tsiboboka dia mifanakaiky amin'ny trondro alohan'ny hivadihany ho sahona.Izany hoe tsy azo hodian-tsi-hita ny zavamisy maneho fa misy rafitra tetezamita eo amin'ireo karazana roa samihafa tanteraka ireo.
Ny tiana iaviana dia hoe tsy misy tsy hita ankehitriny eo amin'ny firafitry ny zavamananaina isan-karazany fa misy ireo taova fototra iraisana sy ireo taova mahasamihafa amin'ny maha-taranaka samihafa azy avy ary tsy maintsy hita hatrany ireo izay manana toetra misabaka hahafahana mamaritra fa manana anjaran-toerana ho vona eo amin'ny sandrahaka ilay karazana zavamananaina io.
Ny hoe fantina natoraly indray aloha dia mety ho diso lalana ihany ny fampiharana azy fa ny adaptation no tokony hadihadiana bebe kokoa amin'ny fisandrahan-taranaka.
Nehemiah - 25/07/2013 10:17
Mety tsy azonao angamba hoe matoa misy ireo fandalinana ny fifandrohizan-tarazo eo amin'ny zavamananaina rehetra dia noho ny fandroson'ny fahalalàna fa ny ADN no rafitra mandrindra ka misy ireo karazana taova izay mbola hita ankehitriny eo amin'ny biby izay mitovy firafitra na koa misy tetezana hiampitany amin'ny rafitra manaraka.
Ianao no tsy nahazo ny tiako iaviana : arakaraky ny foto-kevitra mifehy ny ts11 ny tsoa-kevitra. Ny mpandala evôlisiona rehefa mahita an'izay dia mitompo teny fantatra fa ny fisian'ny razana iombonana no mahatonga an'izay. Fa raha ny Baiboly kosa no arahina dia ny Mpamorona iombonana no mahatonga an'izay, fa tsy voatery ny tsoa-kevitry ny mpandala evolisiona no marina.
Miharena Miteny sahona sy trondro ihany moa ianao, fantatra fa ny firafitry ny tsiboboka dia mifanakaiky amin'ny trondro alohan'ny hivadihany ho sahona.Izany hoe tsy azo hodian-tsi-hita ny zavamisy maneho fa misy rafitra tetezamita eo amin'ireo karazana roa samihafa tanteraka ireo.
Ay ve ny lalàn'ny biogénèse ? Ilay hoe "L'ontologie reproduit la phylogénie" noforonin'i Ernst Haeckel ? Ilay hevitra milaza fa mandalo ny dingan'ny fivoarany rehetra ny tsimoky ny karazan-javaboary 1 ?
Toy izao ny sary nataon'i Ernst Haeckel (izay azo lazaina fa apôstôlin'ny fotopisainan'i Darwin tany Alemaina. Izy no anisan'ny antony voalohany nahatonga ny Alemaina hisintaka t@ finoana kristiana ka nanome vahana an'i Hitler) :
Tsimoka 8-n'ny karazam-biby samihafa samy @ dingan'ny firoboroboany 3 samihafa
Toy izao indray no zavatra hitan'ny mpahaitsimoka (embryologiste) Michael Richardson rehefa nalainy sary ireny tsimoka ireny t@ dingam-pitomboana voalohany :
Filaharana voalohany : sary nataon'i Haeckel izay mampiseho tsimoka samihafa ao anatin'ny dingam-pirtomboana voalohany. Toa mitovy izaitsizy izy ireo rehefa jerena. Iny no nampiasain'i Haeckel mba hanaporofoana ny "lalàn'ny biogénèse" noforoniny mba hanohana ny fotopisainan'i Darwin.
Filaharana faha2 : Photos noraisin'i Richardson maneho ny tena endrik'ireo tsimoka ireo @'izao dingam-pitomboana izao. Manomboka avy ankavia mankany ankavanana : Salmo salar (saumon), Cryptobranchus allegheniensis (salamandre), Emys orbicularis (sokatra cistude), Gallus gallus (akoho), Oryctolagus cuniculus (b), Homo sapiens (olombelona).
Azo antoka ankehitriny fa hosoka ny sarin'i Haeckel ary lainga bevava ny lalàn'ny biogénèse.
Miharena Ny tiana iaviana dia hoe tsy misy tsy hita ankehitriny eo amin'ny firafitry ny zavamananaina isan-karazany fa misy ireo taova fototra iraisana sy ireo taova mahasamihafa amin'ny maha-taranaka samihafa azy avy ary tsy maintsy hita hatrany ireo izay manana toetra misabaka hahafahana mamaritra fa manana anjaran-toerana ho vona eo amin'ny sandrahaka ilay karazana zavamananaina io.
Azafady aminao fa fisainana mitamberina ny anao : milaza ianao fa manaporofo ny evôlisiona ny fananan'ny zavamananaina isan-karazany fitovizana @ rafi-batana, ary fananan'ny zavamananaina isan-karazany fitovizana @ rafi-batana no manaporofo ny evôlisiona.
Miharena Ny hoe fantina natoraly indray aloha dia mety ho diso lalana ihany ny fampiharana azy fa ny adaptation no tokony hadihadiana bebe kokoa amin'ny fisandrahan-taranaka.
Ka ny fantina natoraly anie no miteraka ny adaptation : vonoiny ny zavamananaina tsy misahaza @ tontolo iainany.
Nehemiah - 25/07/2013 10:20
Ity indray ny rohy mankany @ fizaràna manaraka :
Miharena - 25/07/2013 11:35
Koa raha atao hoe tsy io aza no mitranga araka ny fiheveranao hoe diso ny fantina natoraly arak'i Darwin, dia tsy azo heverina izany ny faharitran'ny taranaka, ka tokony mbola hisy mandrak'ankehitriny ny dinôzoro.
Fa eo tokoa aloha mbola misy fanontaniana manitkitika ahy amin'ny fikarohana hafa fantatra momba ny zavamananan'aina ao amin'ny bolan-tany anatiny izay ilaza fa ny karazana hyppopotame lehibe izay efa ripaka teto amin'ny velaran'ny bolantany dia hita ao amin'ny tontolo anatin'ny tany. Ity indray dia filazana fa toy ny baolina ny tany ary ny voa ao anatiny manana ny andraikitry ny masoandro manazava ny hodiny anatiny. Izany hoe tsy misy alina izany ao amin'io faritra io. Dia raha nisy vavolombelona sendra tafiditra tany dia nahita tokoa fa misy zavamananaina izay efa tsy fahita tety amin'ny hodin-tany ivelany no mbola velona ao.
Ankoatr"izay koa, ianao izany namana dia tsy tokony ho sahirana ihany ve mampianatra ny ankizy momba ny paleontolojia sy ny haibolan-tany? Izny hoe toherina daholo ny siansa ankehitriny satria tsy misy mmilaza ny marina na dia iray aza!!
Dia mampanontany tena ihany io hoe sao tokony hanangananao lohahevitra iray kosa ny hoe toy izao no namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao???
Nehemiah - 25/07/2013 17:13
Ka tsy niteny aho anie hoe diso ny fantina natoraly arak'i Darwin (sady raha ny tena marina manam-pahaizana mpandala ny fahariana no nahita azy talohan'i Darwin). Ny zavatra nolazaiko dia diso ny tsoa-kevitr'i Darwin hoe ampy hamoronana karazan-javaboary vaovao tanteraka ny fantina natoraly.
Miharena Fa eo tokoa aloha mbola misy fanontaniana manitkitika ahy amin'ny fikarohana hafa fantatra momba ny zavamananan'aina ao amin'ny bolan-tany anatiny izay ilaza fa ny karazana hyppopotame lehibe izay efa ripaka teto amin'ny velaran'ny bolantany dia hita ao amin'ny tontolo anatin'ny tany. Ity indray dia filazana fa toy ny baolina ny tany ary ny voa ao anatiny manana ny andraikitry ny masoandro manazava ny hodiny anatiny. Izany hoe tsy misy alina izany ao amin'io faritra io. Dia raha nisy vavolombelona sendra tafiditra tany dia nahita tokoa fa misy zavamananaina izay efa tsy fahita tety amin'ny hodin-tany ivelany no mbola velona ao.
A-a-a kosa, aza avoana @ angano New Age indray ilay resaka. Zavatra efa hitako ity resaka soleil interne ity, fa tsy misy fotony ara-tsiansa ny tena marina. Tsy mahavaly an'izao hevitra izao mihitsy aho.
Miharena Ankoatr"izay koa, ianao izany namana dia tsy tokony ho sahirana ihany ve mampianatra ny ankizy momba ny paleontolojia sy ny haibolan-tany? Izny hoe toherina daholo ny siansa ankehitriny satria tsy misy mmilaza ny marina na dia iray aza!!
Tiako averina kely fa hafa ny siansa ara-panandramana, hafa ny siansa ara-tantara : ny siansa ara-panandramana dia mikarakara momba ny zavatra sy fizotra misy ankehitriny izay azontsika averina sy akàna toky, fa ny siansa ara-tantara indray dia mitovy @ asan'ny mpitsongodiam-pôlisy : ezahana fantarina ny lasa @ alalan'ny zavatra misy ankehitriny, kanefa tsy hay anaovana fanandramana ny lasa. Raha te-hahafantatra bebe kokoa ny mpamaky dia afaka mijery eto.
Mailomailo ny hiala @ "fangejan'"ny finoana kristiana ny vazaha taorian'ny Siècle des Lumières ka rehefa nahita fomba fanazavàna ny nipoirantsika tsy mampiditra an'Andriamanitra Andriananahary an-tsehatra ilay izy, tonga dia nifandrombahan'izy ireo, ary ny Fiangonana @'izany dia tsy mba nanohitra fa naleony hisintaka - izay no hadisoany goavana be - ; ka mitaratra an'izay finiavana hiala @ Andriamanitra izay manan-ko lazaina @ fitondran-tenantsika ity fotopisainana ity ny tena marina.
Miharena Dia mampanontany tena ihany io hoe sao tokony hanangananao lohahevitra iray kosa ny hoe toy izao no namoronan'Andriamanitra izao rehetra izao???
Soso-kevitra raisiko an-tanan-2 izao, fa tsy ho vita in1 andro angamba...